China ndị na-emepụta ngwa ahịa ụwa na ndị na-eweta ya | Ngwa Dongheng
Njirimara nke alaeze eluigwe
EZE auger ụwa nwere usoro 25 sitere na YDH mini ruo YDH150000, nke kwesịrị ekwesị maka ndọkpụkọ 0.8-50ton, skid steer na backhoe Loader wdg.
Akwụkwọ ikike na ọrụ
Akwụkwọ ikike nke otu afọ maka moto na ọnwa 18 maka gearbox.
Anyị na-enye nkwado ọrụaka na ọrụ ntanetị.
AKWA Ogo HYDRAULIC MOTOR
EZE ọrụ nke ọma pụtara na anyị na-etinyekwu uche iji zụlite mgbakwunye ndị a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ahịa.
Nhazi Gear nakweere teknụzụ nhazi usoro ikpo ọkụ pụrụ iche, nke Dọkịta nke Mahadum Tsinghua mepụtara.
MGBE A NA-AH DISPUP DISTA AH.
N'ịbụ nke pụrụ iche na eze auger ụwa, Ogwe Na-enweghị Mpụpụ bụ otu mpempe ụgbọala na-agbakọta site na elu ala wee kpọchie ya na oyi akwa ụwa.
Nhazi a na - ekwe nkwa na osisi ahụ agaghị ada ada.
Dum set gụnyere 6 n'akụkụ dị ka n'okpuru na-egosi:
Anyị nwere otu pin pinch, abụọ pin ikedo na kredul ebuka maka ijikọ EZE auger mbanye na excavator / backhoe Loader / skid iduzi wdg
Anyị na-Nlụpụta auger malite ịgba na ndọtị mmanya onwe anyị. E nwere 8mm, 10mm, 12mm na 16mm dị iche iche ọkpụrụkpụ nke auger ụgbọ elu izute ndị ahịa dị iche iche na-arụ ọrụ chọrọ.The ọkọlọtọ ogologo bụ 1.5m .Ma anyị nwekwara 1m, 2m na 2.5m ogologo. The nso nke dayameta si 100mmto 2000mm.We nwere ike arụpụtara dị ka gị mkpa.
Banyere ogwe ogwe, enwere 1n, 1.5m, 2.5m, 3m ogologo dị iche iche ahaziri.
The dayameta nke ndọtị mmanya bụ 89mm, 108mm, 127mm na 146mm.
N'ihe banyere nhọrọ ezé, anyị nwere ezé ezé, ezé ezé na ezé ezé maka ala dị iche iche. A na-eji ezé egbue ezé, ma ọ bụ ọtụtụ gravel. A na-eji ezé gbara gburugburu na ụrọ, ala aja, ala oyi ma ọ bụ obere gravel. Ezé ezé na-eji ala nkịtị.
EZE ụwa auger na-emetụta ike eletrik, oke ohia, ọrụ mkparịta ụka nke telecommunication, ụgbọ okporo ígwè dị elu, Nhazi ala, ịkụ osisi, Ọgwụ na-agwụ ike, Mkpokọta ntọala, Ihe nkedo ikpo ọkụ, nfuli ọkụ ọkụ nke ala, Ogwe osisi na Mast, Ntinye ike anyanwụ, Bridge Pier mkpọpu ala wdg.
AKWERKWỌ auger ụwa bụ A \_ na-emetụta ala dị iche iche, dị ka ala oyi kpọnwụrụ, ala dị ọcha, ala dị nro, ụrọ, ájá, fosili ikuku, yana gravel, pebbles na na.
Anyị na-eji varnish mmiri na agba elu ya eme ihe na-enweghị ntụpọ. A na-emeso akụkụ ndị ahụ gosipụtara na mgbochi nchara. Ngwa ahịa mbupụ na-ejupụta n'okwu plywooden iji hụ na enweghị ntụpọ, nchara na ihe ndị ọzọ na-eme n'oge njem.
Mejuputa echiche zuru ụwa ọnụ banyere nchebe gburugburu ebe obibi, belata iji plastik na ihe nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ na-emebi gburugburu ebe obibi.
Anyị nwere ike dakọtara kwesịrị ekwesị ihe nlereanya dị ka gị excavator ibu.
Nke gara aga: Igwekota ịwụ
Osote: MINI onye na-egwupụta ihe